Ama-solvents ajulile e-eutectic (ama-DES) nama-solvents e-eutectic ajulile angokwemvelo (NADES) anikeza izinzuzo njengamakhemikhali okususa kumazinga amaningi futhi ngaleyo ndlela ayindlela ethembisayo kuma-solvents ajwayelekile we-organic. Umsebenzi we-solution eutectic ojulile usebenza kahle kakhulu ngokuhlanganiswa nesizinda se-ultrasonic futhi unikeze isivuno esiphezulu sezinto ezisezingeni eliphakeme ze-premium. Thola okuningi mayelana nesizinda se-ultrasonic usebenzisa izixazululi zemvelo ezijulile ze-eutectic.
Yini ama-Deep Eutectic Solvents (DES)?
Ama-solvents ajulile eutectic (DESs) ayingxube okungenani eyodwa ye-hydrogen bond acceptor (HBA) kanye ne-hydrogen bond donor eyodwa (HBD), kufaka phakathi i-carboxylic acid namanye amakhemikhali avuselelekayo. Ngokusho kukaCai et al. (2019), "ukuxhumana okuqinile kwe-hydrogen bonding phakathi kwe-HBA ne-HBD yinto ebaluleke kakhulu ekwakhiweni kwama-DES." [UCai et al. Kwabanikeli be-hydrogen bond (HBDs), izinhlanganisela ezifana noshukela, ama-amino acid, i-carboxylic acid (isb. I-benzoic acid, i-citric acid, i-succinic acid) noma ama-amine (isb. Urea, benzamide) avame ukusetshenziswa. Amandla wokusebenzisana kwamakhemikhali ama-HBDs yizona zinto ezibangela ukwakheka nokusebenza kahle kwama-solvents ajulile eutectic. Usawoti we-Halide onjenge-choline chloride noma i-zinc chloride nawo ungasetshenziswa ngokuhlanganyela nama-HBDs. Amanye ama-DES asuselwa ku-choline chloride akhiwa nge-malonic acid, phenol noma i-glycerine. Njengomphumela wokusebenzisana okuqinile kwe-hydrogen-bonding, iphuzu lokuncibilika kwamakhemikhali awuketshezi eutectic ajule kakhulu uma kuqhathaniswa nezakhi zawo ngazinye. Ngokuphambene namakhemikhali awuketshezi avamile (isb. I-ethanol, i-methanol, i-hexane, i-butane njll.) I-DES ayishintshashintshi, okusho ukuthi inengcindezi ephansi kakhulu yomhwamuko futhi ngaleyo ndlela ayinakho ukutsha. Ubuthi bamakhemikhali awuketshezi eutectic ajulile aphansi, i-biodegradability yawo iphezulu, futhi izandulela ezidingekayo azibizi, zitholakala kalula futhi ziningi futhi ziyatholakala. Ama-solvents ajulile eutectic wemvelo (ama-NADES) anobungani obukhulu njengoba konke okwandulelayo kutholakala emithonjeni yemvelo. Ama-DES nawo anikela nge-solvency elungisekayo esekwe kumakhemikhali we-solute nezinhlobo ezisetshenziselwe ukudala i-DES. Amanye ama-NADES akhombisa i-viscosity ephezulu ngakho-ke awafanelekile ukukhishwa kwe-batch. Kodwa-ke, ama-NADES anama-viscosities aphezulu angasetshenziswa ngempumelelo njengama-solvents ku-ultrasonic flow-through extraction.
Isizinda se-Ultrasonic (semvelo) izinyibilikisi ezijulile ze-eutectic kuyindlela ephumelela kakhulu yokukhishwa okuphezulu kwe-botanical. Isithombe sikhombisa iprosesa le-ultrasonic I-UP400St (400W) ngeqoqo le-8L lokukhishwa kwe-botanical.
Isizinda se-Ultrasonic Botanical ne-UP200Ht
Ngabe Isizinda se-Ultrasonic Sisebenza Kanjani Nezixazululi Ezijulile ze-Eutectic?
Isizinda se-Ultrasonic sisekelwe kwimiphumela ye-sonomechanical ye-high-intensity, i-low-frequency ultrasound. Ukugqugquzela nokuqinisa ukukhishwa kwamakhemikhali e-botanical (okungukuthi, izinto eziphilayo) nge-ultrasonication, amagagasi amakhulu e-ultrasound ahlanganiswa nge-probe ye-ultrasonic (ebizwa nangokuthi uphondo lwe-ultrasonic noma i-sonotrode) ku-medium medium, okungukuthi i-slurry equkethe i-botanical eluhlaza impahla kanye (nemvelo) kuphela i-eutectic solvent. Amagagasi e-ultrasound ahamba ngalolu ketshezi futhi akha imijikelezo ephansi yengcindezi / yengcindezi ephezulu. Ngesikhathi semijikelezo enengcindezi ephansi, kudalwa amabhamuza we-vacuum (okuthiwa ama-bubble cavitation), akhula ngaphezu kwemijikelezo eminingi yengcindezi. Phakathi naleyo mizungezo yokukhula kwamabhamuza, amagesi ancibilikisiwe asoketshezi angena kubhamu elingenalutho, ukuze ibhamu elingenalutho liguquke libe amabhamuza egesi akhulayo. Ngemuva kokukhula ngaphezu kwemijikelezo eminingana, amabhamuza we-vacuum afinyelela usayizi othize lapho engeke akwazi ukumunca amandla athe xaxa, ukuze agxume ngamandla ngesikhathi somjikelezo wokucindezela okukhulu. I-bubble implosion ibonakala ngamandla amakhulu wokufaka amandla, kufaka phakathi izinga lokushisa eliphakeme kakhulu nengcindezi efinyelela ku-4000K no-1000atm, ngokulandelana; kanye nokuhlukahluka okuhambisana nokushisa okuphezulu nokucindezela. Lezi zingxabano ezenziwe nge-ultrasonically kanye ne-shear Force ziphula amangqamuzana ezitshalo bese zikhulula izinhlanganisela ze-intracellular bioactive zibe (zemvelo) kuphela i-eutectic solvent. Isizinda se-Ultrasonic sivula ukwakheka kweseli kwe-botanicals futhi siqinisa ukudluliswa kwesisindo phakathi kwezinto zezitshalo ne-solvent. I-Sonication ithuthukisa ngaleyo ndlela ukusebenza kwezixazululo zemvelo ezijulile ze-eutectic. Isizinda se-Ultrasonic esinemvelo (kuphela yemvelo) izinyibilikisi ezijulile ze-eutectic siphumela kwizithelo eziphakeme ngokukhethekile esikhathini esifushane kakhulu sokucubungula.
Amagagasi amandla e-ultrasound aphazamisa ukwakheka kweseli kwama-botanicals, akhiphe izakhi ezihlanganayo futhi akhuthaze ukudluliswa okukhulu phakathi kwezinto zokutshala kanye ne-solvent (isb., Izixazululi ezijulile ze-eutectic).
Izinzuzo ze-Ultrasonic Extraction nge-Deep Eutectic Solvents
Iqondiswa kahle kwi-botanical ethile
Izimo zokucubungula eziphansi
Iqoqwana nemodi yokugeleza
Kulula futhi kuphephile
Ukulungele imvelo / okubolayo
Inhlanganisela yesizinda se-ultrasonic (semvelo) izinyibilikisi ezijulile ze-eutectic ikunikeza ithuba lokuhlanganisa inqubo yokuqinisa amandla e-ultrasound ngemiphumela ephawulekayo yokuncibilikisa amandla nokuklama okuvelele kwama-solvents ajulile eutectic.
Xhumana nathi manje ukuze ufunde kabanzi mayelana nesicelo esinamandla sokukhipha i-ultrasonic usebenzisa ama-solvents ajulile eutectic!
umshini we-ultrasonic I-UIP2000hdT (2kW) ukukhiqizwa kokukhishwa kwe-botanical
Isizinda se-Ultrasonic ubuchwepheshe bokusebenza obunokwethenjelwa, obusiza futhi busheshise ukukhiqizwa kokukhishwa kwekhwalithi ephezulu kusuka kuzitshalo ezahlukahlukene zezitshalo kanye nanoma iyiphi i-solvent. Isizinda se-Ultrasonic sisebenzisana kakhulu (nemvelo) izinyibilikisi ezijulile ze-eutectic, ezithandekayo ngenxa yamandla azo okuncibilikisa kakhulu amandla, ukukwazi ukukhishwa kokukhishwa, ukusimama, i-biodegradability kanye ne-eco-friendly. Ukuhlanganiswa kwenqubo yokuqiniswa kwamandla e-ultrasound nezinzuzo (zemvelo) izixazululi ze-eutectic ezijulile kunika le nqubo ubuchwepheshe ukuphakama emazingeni amaningi. Iphothifoliyo yeHielscher Ultrasonics ifaka uhla oluphelele kusuka kuma-compact lab ultrasonicators kuya kumasistimu wokukhipha ezimbonini Zonke zazo zilungele ukukhishwa ngezixazululo ezijulile ze-eutectic.
Abasebenzi bethu besikhathi eside abanolwazi bazokusiza ekuhlolweni okungenzeka nasekusebenziseni inqubo ekufakweni kohlelo lwakho lwe-ultrasonic ezingeni lokugcina lokukhiqiza.
Isici se-Hielscher Ultrasonics 'Extractors:
ukusebenza kahle kwamandla-ultrasound
ukusebenza ku-batch naku-flow-mode
imiphumela ephindaphindekayo / ephindaphindekayo
izidingo zokugcina eziphansi